Sidee loo rakibaa Ruby Ubuntu? | Laga soo bilaabo Linux
Sidee loo rakibaa Ruby Ubuntu?
Perseus | | Qaybinta, GNU / Linux, Barnaamijka, Casharrada / Buugaagta / Talooyinka
Maalmihii la soo dhaafay waxaan xoogaa mashquul ku ahaa horumarinta mashruuc loogu talagalay <° Laga bilaabo Linux (taasi waa sababta maqnaashahay: P), aan u horumarinayo mashruucan Ruby on Rails.
Nasiib darrose qaybinta qaar lama yimaadaan Ruby lagu rakibay qaab ahaan isla markaana nooca ka muuqda bakhaarrada durbaba xoogaa waa "duug". Kuwa isku dayay inay gacanta ku qabtaan, waxay fahmi doonaan in rakibidda noocaas ahi ay tahay wax «adag oo adag«, Marka markan waxaan ku tusi doonaa sida saxda ah ee loo rakibo Ruby iyo RubyGems Ubuntu iyo noocyadeeda kala duwan hab fudud oo fudud :). Ma aqaano inay tani u shaqeyn karto Debian sidoo kale, markaa haddii qofna isku dayo inuu isku dayo, soo dhawow;). Qeybinta kale, waxaan u maleynayaa inay kaliya noqoneyso arrin raadinta xirmo isku mid ah ama isku mid ah.
Ka dib markii aan baaray shabakadda oo aan isku dayay dhowr siyaabood oo sida saxda ah loo sameeyo (iyada oo aan guuleysan: (), Waxaan ka helay qoraal yar oo baloog ah oo u oggolaanaya in wax ka badan ama ka yar la sameeyo, maxaa yeelay dhammaadka rakibaadda ayaa igu tuurtay xoogaa yar khaladaadka iyo in yar digniino, sidaa darteed waxaan qaaday howsha xallinta godadkaas oo waxaan sameeyay xoogaa saxitaanno ah :). Waa inaan cadeeyaa inaan ku daray kaliya xirmooyin aan lagama maarmaan u aheyn Ruby;).
Waa hagaag, iyada oo aan la sii raacin, halkan waa qoraalka la beddelay:
Sida aad arki karto, waa wax fudud. Halkan qodobka muhiimka ah ee qoraalku wuxuu noqonayaa in la doorto nooca Ruby ee ay rabaan inay rakibaan, marka loo eego waxay ku rakibi doontaa nooca ugu dambeeyay ilaa taariikhda, laakiin haddii ay jecel yihiin inay adeegsadaan nooc kale, waxay kaliya ku qasbanaan lahaayeen inay wax ka beddelaan waxyaabaha soo socda khadka:
nooca aad rabto inaad rakibto, waa in la ogaadaa inaad kaliya u baahan tahay inaad soo gasho nambarka nooca si qoraalka uu si sax ah ugu shaqeeyo;). Kaliya u magacaw faylka: rakibi_ruby
Sida loo fulinayo waxay noqon laheyd:
Waxaan rajaynayaa inay waxtar kuu yeelan karto, ha joojin faallooyinka oo xusuusnow: Koodh faraxsan ????
Wadada buuxda ee maqaalka: Laga soo bilaabo Linux » Qaybinta » Sidee loo rakibaa Ruby Ubuntu?
Waayahay, sug. Waa mashruuckee?
Ok wakhti yar isii oo waan kula soo socodsiin doonaa hadii ay ku shaqeyso debian.
Anigu ma ihi barnaamij yaqaan mana u maleynayo inay wax weyn ii tari doonto, waa xiise fudud oo ah inaan arko haddii qoraalkaagu shaqeynayo iyo sida ay u leedahay cilladaha, anigu wax fikrad ah ama xitaa kuma mashquulin inaan hubiyo. XD
troll on mode: Ruby waa luqadda hipsters! xD
Sure mode, sida ay halkan uga muuqato:
[/ qaabka gawaarida loo gooyo]
Sax kaaga Wakiilka isticmaalaha, qaybinta "Kubuntu Firefox" ma jirto. 😛
barta kubbada "apt-get rakibi Firefox",
hada waa jirtaa !!!
Qoraal fiican Perseus nasiib daro uma isticmaalo Ubuntu inaan ku tijaabiyo: S Ruby iyo Python waa luuqadaha aan jeclaan lahaa inaan barto. Talo kasta ???
Ruby ahaan, waxaa jira buugaag Ebook aad u fiican, laakiin nasiib daro kuwa ugu fiican waxay ku qoran yihiin Ingiriisi, haddii aysan taasi kaa hor istaagin, waad aqrisan kartaa: Laga bilaabo Ruby laga bilaabo Novice ilaa Edition Second Professional (Peter Cooper) - Apress. In kasta oo lagu jiro luqaddan, Ingiriisigu waa wax la fahmi karo oo la fahmi karo, mid ka mid ah kuwa ugu fiican ee aan arkay;).
Sida Python, waxaa jira macluumaad badan oo ku saabsan shabakadda iyo in badan oo ka mid ah oo ku qoran afkeenna :).
Haddii aad u baahato xiriiriye 'ruby', ii soo sheeg oo si farxad leh ayaan kuugu soo diri doonaa ^. ^
Waad ku mahadsantahay tallada Perseus Waan soo dejinayaa oo waxaan isku dayi doonaa inaan akhriyo inkasta oo aan aqaano ingiriisiga inbadan ama kayar 😀
Si loo rakibo ruby ​​waxaan isticmaalaa rvm ( https://rvm.io/ )
Waxay u oggolaaneysaa inay lahaato noocyo kala duwan oo ruby ​​ah oo la rakibo iyo in la abuuro noocyo dhagaxyo leh.
Aad iyo aad ayey u fiican tahay.
Merlin oo reer Debian ah dijo
Haa waxay ku shaqeysaa debian laakiin waxay ku shaqeysaa kaliya terminal.
Jawaab si Merlin Debianite ah
si laguu siiyo rukhsadda
taasi aniga iima aysan shaqeyn aniga la'aanteed ...
Available SliTaz 4.0: Qalab loogu talagalay kombiyuutarada leh 128Mb oo RAM ah: D
Jitsi 1.0 xasilloon ayaa la heli karaa!